Uncategorized | မိုးစက်မှော်
In 2010, there were 69 new posts, growing the total archive of this blog to 342 posts. There were 50 pictures uploaded, taking upatotal of 47mb. That’s about4pictures per month.
The busiest day of the year was November 2nd with 1 views. The most popular post that day was နိုင်ငံခြားရောဂါ.
The top referring sites in 2010 were facebook.com, khinoomay77.blogspot.com, saturngod.net, wesheme.blogspot.com, and en.wordpress.com.
Some visitors came searching, mostly for အချစ်ကဗျာများ, အတွေးအခေါ်, စောက်, ဂေး, and ဗေဒင်.
နိုင်ငံခြားရောဂါ November 2010
ကျွန်တော်နဲ့ ဗေဒင် October 2010
သေလိုက်ပါလား ကျော်ဟိန်းရယ် July 2010
အ၀င် အထွက် September 2010
ကျွန်တော်နဲ့ ဂေးများ December 2009
Please do! ANYWAY
” ANYWAY “
လူတွေဟာ အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် မစဉ်းစား၊ ယုတ္တိမတန်၊
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လူတွေကို မေတ္တာထားပါ။
သင်ကောင်းတာလုပ်တဲ့အခါ လူတွေက သင့်ကို တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သူ၊
ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိသူလို့ စွပ်စွဲကြလိမ့်မယ်။
သင်အောင်မြင်တဲ့အခါ မိတ်ဆွေတုနဲ့ ရန်သူစစ်ကို သင်ရလိမ့်မယ်။
သင့်ကို အားနည်းချက်တွေရှိအောင် ပြုလုပ်လိမ့်မယ်။
လူတွေဟာ အကူအညီကို တကယ်လိုအပ်တယ်။
ဒါပေမယ့် သူတို့ကို သင်ကူညီတဲ့အခါ သင့်ကို ဝေဖန်ထိုးနှက်ကြလိမ့်မယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လူတွေကို ကူညီပါ။
ကမ္ဘာလောကကြီးကို သင့်မှာရှိတဲ့ အကောင်းဆုံးအရာကိုပဲပေးပါ။
ဒါပေမယ့် သင်ဟာ ထိခိုက်နစ်နာပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကမ္ဘာလောကကြီးကို သင့်မှာရှိတဲ့ အကောင်းဆုံးအရာကိုပဲပေးပါ။
သူငယ်ချင်းမတစ်ယောက်ဆီက ရတာပါ၊ အတော်လေးကောင်းပါတယ်၊
တစ်ခါတလေခံစားရနိုင်တဲ့ ခံစားချက်တွေကို မာသာထရီဇာက